Global Voices teny Malagasy » “Thérèse Kely”-n’i São Paulo Miady Amin’ny Haintany Sy Ny Fahambonian’ny Lehilahy · Global Voices teny Malagasy » Print
“Thérèse Kely”-n'i São Paulo Miady Amin'ny Haintany Sy Ny Fahambonian'ny Lehilahy
Voadika ny 03 Avrily 2016 8:57 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika (es) i Verónica Barroso, Henri Dumoulin, Sylvia Aimée
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Vehivavy sy Miralenta
Roa amin'ireo barika fanatàzana ranon'orana roa napetraka ao amin'ny favela Verqueirinho ao Sao Paulo. Brezila. Nampanarin'i Terezinho da Silva an'ireo mponina ao ny fomba fanamboarana azy ireo.
Ity lahatsoratr'i Carolyn Beeler  ho an'ny andiany #HerPlanet  ity dia navoaka voalohany tamin'ny PRI.org  ny 24 febroary 2016 teo, navoaka fanindroany indray eto ao anatin'ny fiarahamiasa fifampizaràna vontoaty.
Hita manerana ny lalànkely marobe any amin'ireo favelas ao São Pauloireo ny fako, ny ahidratsy , tsy maintsy mivonona amin'izany. Nefa ao Sao Mateus (Saint Mathieu), ivelan'ny tanàn-dehibe, misy koa zavatra iray izay tsy ampoizina ny hahitàna azy: barika plastika ngezabe feno ranon'orana ary voaravaka mahafinaritra tamin'ny tànana sy tongotr'ireo ankizy.
Notatazana tamin'ny fantsona manomboka hatreny amin'ny tafo io rano io, manaraka sivana mba hanivanana ny moka sy ireo ravinkazo, avy eo mirotsaka ho tahiry ao anaty barika, azo ampiasaina hanondrahana ireo voly, fanadiovana, resaka ara-pahasalamana ary koa ireo filàna ao an-tokantrano.
Porofon'ny tetikasa napetraky ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana ireo barika ireo, taorian'ny taona roa nisian'ny haintany tao amin'ny faritr'i São Paulo, nandritra izany fotoana izany tapaka matetika ny famatsiana rano tany amin'ireo faritra marobe tao an- tanàna, ireo mponina tany amin'ny faritra manodidina no tena voakasik'ireny fameràna ireny.
Tereinha da Silva eo ankilan'ny iray amin'ireo barikan-dranon'orana. Sary: Anne Bailey. Nampiasaina nahazoana alalàna tamin'ny PRI.
Ireo barika ireo no karazam-bokatra ‘tsara’ nateraky ny ‘haintany. Sorena vokatr'io tsy fisian-drano io ireo mponin'i São Paulo. Heverin'izy ireo fa tsy ampy ny fandraisana andraikiny ny governemanta mba hamahàna ny olana. Izy ireo ihany no nanomboka nanandrana namaha io olana io.
Toy izay no nataon'i Terezinha Da Silva. Io Therèse kely tsy mirefy afa-tsy 1,37m monja io no nampiasa angovo goavana.
Nanomboka nametraka ireo “barikan'orana” teo amin'ny tokontany anatin'ny  tranony izy mialohan'ny hahatongavan'ny haintany mahazatra mba hitsitsiana vola sy hanànana rano mandritra azo ampiasaina mandritra ireo fahatapahana. Avy eo, koa satria niha-mafy ny haintany, nanomboka nampianatra ireo vehivavy hafa tao an-tanana izy mba hametraka ireny barika ireny amin'ny fampiasàna fitaovana mora vidy sy mora hita. Amin'izao fotoana izao mahita barikan'orana maherin'ny dimampolo eran'ny faritra isika.
Eo amin'ny barikan'orana 50 no mipetraka manerana ny favela Verguerinho ao amin'ny faritr'i Sao Mateus ao Sao Paulo. Sary: Anne Bailey. nampiasaina nahazoana alalàna tamin'ny PRI.
Eo andalam-pametrahana ny hetsiky ny fiarahamonim-pirenena eo amin'ny vondron'ireo vehivavy izy: “Mofo sy zavakanto”, natao mba hanampiana ireo vehivavy eo amin'ny faritra hanangana firaisankina ara-toekarena, fampandrosoana, fahafahana mahazo ny zony.
Io hevi-dehibe io, “Ho an'ny sy avy amin'ireo vehivavy”, dia hevitra fototra ho an'i Thérèse, satria i Brezila dia fiarahamonina anjakan'ireo lehilahy. Ary, manampy izy fa: “Iharan'ny herisetra marobe ireo vehivavy, fantatray amin'ny alalan'ireo isa ofisialy izany ary satria koa iainanay”.
Manana antony manosika azy manokana ihany koa izy mba hanampiana ireo vehivavy hafa, hanampiana azy ireo hiatrika ny tsy fahampian-drano sy ny sisa ambiny:
Ataoko am-pitiavana io asa io izaho koa mba anisan'ireo avotra, nisy nanavotra ny fiainako!
Nanomboka niasa sahala amin'ny mpiasa an-trano i Terezinha Da Silva fony vao 14 taona ary nandritra ny 30 taona izany. Lazainy fa tsapany ho toy ny simban'ny asa tanteraka izy. Vokatr'izany, teo amin'ny manodidina ny faha-efapolo taonany, nanomboka niasa maimaim-poana izy, niasa tamin'ny Fikambanana iray Tsy miankina misahana ny fanatsaràna ny faripiainan'ireo mponina tao amin'ny favela izy: Movimento de Defesa do Favelado.
“Nianarako araka izany fa na sady mahantra no sady vehivavy aza, azo natao ihany ny manova ny ho aviny. Rehefa manomboka fantatrao ireo zonao, te-hiady ianao mba hahitanao indray ny fahamendrehanao, ary dia marina indrindra io ho an'ireo vehivavy”, hoy ny fanazavany.
Miasa tontolo andro ao amin'io fikambanana io i Terezinha Da Silva ankehitriny izay natombony tamin'ny an-tsitrapo, namolavola tetikasa vaovao mikasika ny fampandrosoana eo an-toerana nateraky ny tsy fisian'ny rano izy: ireo zaridaina mijidina an'ny vondrom-piarahamonina.
Toy ireo barikan-dranonorana, mampiasa tetika tsotra nataony tao an-tranony izy: fantsona plastika mitandavana voadidy manaraka ny halavany, feno tany sy mihantona eny amin'ny rindrina, izay amboleny tongolo be, basilika ary sakay.
Thérèse Da Silva dia manana barikan-dranonorana telo eo an-jaridainany ary iray ao amin'ny trano fanasan-damba mba hahafahana midio sy manondraka ireo voly.
Ny tanjona dia ny mba hahatonga ireo mpifanila vodirindrina hiara-hirona ary hametraka faritra milamaka mba hambolena anamaitso.
Ambonin'izany, ny ezaka nataony dia nitondra vokatra manenika ny manodidina azy.
“Thérèse kely” dia tena olona manana ny lanjany mihintsy” hoy Maria Auxiliadora taminay, mponina eo an-toerana, ary eo ampiarahana miasa aminy izy mba hanamboatra zaridaina mijidina eo ambony tafontranony. “Olona tena mpanolo-tena an-tsitrapo izy ary sarotra esorina na dia marary sy manana olana aza. Amin'ireo tranga ireo, tsy eritreretiny izany ary tonga izy hanao ny asany ihany ho an'ny fiarahamonina”.
Manazava aminay i Thérèse kely fa ny asa no manavotra azy. Mieritreritra izy fa io haintany mitranga ao São Paulo io amin'ny farany dia ahazoana tombony ankolaka tsara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana .
“Misy zavatra tsara mivoaka amin'io krizy io” hoy Terezinha Da Silva taminay. “Fahatongavan-tsaina: tonga io tsy fisian-drano io amin'ny fotoana izay tokony ilàna fandraisana fahatsapan-tena momba ny olana, mitranga izany na dia any amin'ny firenena manana ny ampahavalon'ny rano mamy eran'izao tontolo izao aza, tsy zo tsy maintsy azo fotsny amin'izao ny rano mikoriana any an-trano”.
Tsy izy irery no nieritreritra an'io.
“Nazava tamin'ny mponina fa zavatra tena manan-danja ny fitsinjaràna ny rano ” hoy ny fanazavàn'i Monica Porto, sekretera lefitra misahana ny loharanonkarena momba ny rano ao amin'ny fanbjakan'i São Paulo. Tsy azo atao ny voatery hionona fotsiny mamoha ny paompy dia miandry ny rano ho tonga. Ny tsirairay amintsika dia manana andraikitra hitandrina ny rano”.
Mazava loatra, somary sarotsarotra kokoa noho izany io. Misy mponina an-.tapitrisa amin'ireo tena mahantra, sahala amin'ireo manodidina an'i Terezinha Da Silva, izay mbola tsy nandre mihintsy hoe mamoha fotsiny ireo paompy dia mahazo rano, izay tena nijaly tanteraka nandritra ny haintany. Ireo dia tsy nila nampianarina ny maha-manan-danja ny rano.
Ireo barikan-dranonorana eo an-jaridainan'i Thérèse da Silva. Sary: Anne Bailey. Nampiasaina nahazoana alalàna avy amin'ny PRI.
Lesona mivaingana io, izay, na ny governemantam-paritra aza efa nitazona azy. Manorana indray izao ao São Paulo, nefa ireo siantifika maminavina fa efa manomboka manova ny toetrandro ao an-toerana ny fikorontanan'ny toetrandro. Monica Porto mieritreritra fa ny haintany dia manampy ireo mpitondra ny faritra hahatsapa tena fa mila rafitra fitantanana rano tena mahomby afaka mijery mialoha izay hiatrehana ny ho avy i São Paulo.
“Tsy fantatray hoe inona no andrasana amin'ny fikorontanan'ny toetrandro. Tsy fantatray raha hanana tondradrano bebe kokoa na haintany betsaka kokoa ny faritr'i São Paulo”, hoy Monica Porto taminay. “Saingy na inona mitranga, aorian'io haintany io, mba fantatray tsara fara-faharatsiny fa tsy maintsy mba efa tsara fiomanana amin'ny rehetra izahay.”
Mitarika fiovàna betsaka io: tahirin-drano vaovao, fomba fizaràna maoderina, barikan-dranonorana eny an-jaridaina sy eny ambonin'ny tafo, ary fiarahamonina iray mandray anjara mivantana amin'io fanamby io.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/04/03/80667/
 tokontany anatin'ny: https://fr.wikipedia.org/wiki/Patio